अ मनोलोग - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
अ मनोलोग | Saturdayकलम | Kavyalaya
Image Background Source:
by मेन्टालिक July 13, 2019
अलिकति कृतज्ञ त तिमी प्रति जिवनभर म हुनु पनि पर्छ किनभने यति स्वतन्त्रता त तिमीले दिएकी छौ कि म कुनै पनि पल तिमीलाई सम्झन सक्छु । तिम्रो कल्पना मात्रैले पनि मैले आफू भित्रको अस्तित्वको बोध पाउँछु ।
तर अचेल मेरो कल्पनाशीलतामा खिया लाग्दै गएको छ । कल्पना जहाँबाट म आफ्नो सिर्जना जन्माउँछु । जुन तिमी बनेर निस्कन्छन्- कवितामा, कथामा, विचारमा, लेखमा । अचेल बदलिँदै गएको छ रङ्ग । जसरी नासिदै जान्छ फलाम । म पनि सकिदै छु ।
अचेल म मकैका बोट हेरेर कविता कोर्न सक्दिन । मलाई सडकमा भौँतारिदा आनन्द आउँदैन । मेरो कल्पना शक्तिमा आक्रमण भएको छ । विकृत भएको छु म आजभोलि । म सम्झिँनै सकिरहेको छैन कि कहिले मैले यसरी तिमीलाइ सम्बोधन गरेर केही लेखेको थिएँ ।
मेरो मनमा अचेल तीव्र घृणा उत्पन्न भइरहेछ । यो समाज प्रति । यो व्यवस्था प्रति चरम आक्रोश पैदा भएको छ । मलाई म स्वतन्त्र भएर पनि बाँधिएको जस्तै महसुस हुन्छ ।
एउटा तुवाँलो लागेको छ मस्तिष्कमा- धुलो जमेको छ विचारहरुको । यस्ता विचार जुन मेरा होइनन् । ती विचार जुन मेरा हुन सक्दैनन् । विचार भन्दा पनि पर अन्य थुप्रा विचार छन् । जब चेतना र विचार नै खेल्न, खुल्न पाउँदैन मानव कसरी आफुलाइ स्पष्ट पारोस् भन त ? म अझै अस्पष्ट छु कि म के हुँ ?
आकाशमा उडेका पक्षिंहरु छन्, जो स्वतन्त्र भएर पनि बाँधिएका छन् । जकडिएका छन्, आफ्नै जिम्मेवारीले । आफ्नै बिना अर्थको अर्थले । उड्न पाउनु मात्र स्वतन्त्रता हुन्थ्यो भने म पनि तोडेर पर्खालहरु, चुडाएर साङ्लाहरु दौडिन्थे- उड्नका लागि । पुग्न त मन छ अनन्त भन्दा पनि पर । कोहि यति सम्म अवचेतन छ भने के गरोस् कि उसलाइ आफू हुनुको अर्थ नै अनर्थ जस्तै लाग्छ । विश्व सखाप हुने संघारमा छ । मानिस र उनीहरुको सिमित स्वार्थले मानिसको परिभाषित मान्यता नै फेरिदियो । तर म लाचार, विवश भइरहेको छु आफ्नै परिभाषा बदल्न !
तिमी थियौ त सबथोक सम्भव जस्तै लाग्थ्यो । म उड्न सक्थे । म समुद्रको लहरहरुमा तैरिदै भागिरहेको हुन्थे । त्यो तिमी नै थियौ जसले मलाइ मसँग परिचय गरायौ । त्यतिबेला सम्म मैले ऐना त हेर्थें तर थाहा थिएन त्यो म नै हुँ । तिमीले चिन्यौ- त्यो म नै हुँ । मैले आफुलाइ चिने वा भ्रम मा परे कि मैले ब्रह्माण्ड नै बुझे ।
अचेल वर्षौँ जस्तो लाग्छ ऐना हेरेको । त्यो ऐना भित्र अरु नै कोहि बस्छ जो हर बखत मैलाई झम्टिन खोज्छ । मेरो साकारता मन पराउँदैन सायद उ अर्कै छ । म बद्लिए वा के भयो म बुझ्दिन तर त्यो म होइन त्यो ऐना भित्रको मान्छे त्यो अरु नै कोहि हो । उसले पनि त्यस्तै भन्दो हो । त्यो को हो ?? कि म त्यस्तो थिए पहिले वा त्यो जो म हुन चाहन्छु । म के चाहिरहेको छु ?
यो के हो जो म लेखिरहेको छु ? के बढ्दो पुँजिवाद प्रतिको आक्रोश हो जे पोखिरहेको छ ? आफ्नै निकम्मापनको कथा ? आफ्नै काँतरताको प्रेम पत्र ? के हो जो तिमी छौ तर छैनौ ?
त्यो के हो जुन भएर पनि देखिदैन ? जुन नभएर पनि बारम्बर म महसुस गर्छु ? भ्रम के हो ? यथार्थ के हो ? को के हो ?
भित्ताहरु बोलेको सुने भर्खर । म विरुद्ध षडयन्त्र रचिदैछ । मेरो हत्याको योजना बन्दै छ । तर म त वर्षौँ अघि मरिसकेको छु । यो त एउटा आत्मा हो जुन भड्किरहेको छ ।
मेरो आत्माले लेखिरहेको छ मेरो नक्कली मस्तिष्कमा हुने एउटा मनोलोग संवाद जसलाइ पढेर तिमी एउटा मनोटोनस मुस्कान मुस्कुराउन सक्नेछौ वा …..!
Image Source: The Weeping Woman by Pablo Picasso
TEN SHOTS FROM ANUPAM